Imboni Yokuhlola Amandla Eqhumayo - Abakhiqizi, Abahlinzeki Bempahla Yase-China
I-DRK108 Electronic Tear Tester
I-DRK108 electronic tear tester iyithuluzi elikhethekile lokunquma amandla ezinyembezi.Leli thuluzi lisetshenziselwa ikakhulukazi ukunquma ukuklebhula iphepha, futhi lingasetshenziselwa ukuklebhula amakhadibhodi anamandla aphansi.
I-DRK108A Paper Tearness Tester
I-DRK108A Paper Tearness Tester iyithuluzi elikhethekile lokunquma amandla ezinyembezi.Leli thuluzi lisetshenziselwa ikakhulukazi ukunquma ukuklebhula iphepha, futhi lingasetshenziswa futhi ekunqumeni ukuklebhula amakhadibhodi aphansi-amandla.
I-DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester
I-DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester iyithuluzi lamazwe ngamazwe lohlobo lwe-Mullen okuyithuluzi eliyisisekelo lokuhlola ukusebenza kwamandla kwephepha nekhadibhodi.Lolu hlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa, luthembekile ekusebenzeni, futhi luthuthuke kakhulu kwezobuchwepheshe.
Ikhompyutha ye-DRK109 Cardboard Burst Tester
I-DRK109 paperboard bursting tester iyithuluzi lamazwe ngamazwe lohlobo lwe-Mullen okuyithuluzi eliyisisekelo lokuhlola ukusebenza kwamandla kwephepha nebhodi lephepha.Lolu hlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa, luthembekile ekusebenzeni, futhi luthuthuke kakhulu kwezobuchwepheshe.
I-DRK109C Isikrini Sokuthinta Isikrini Esihlakaniphile Sekhadibhodi Yokuqhumisa Umhloli
I-DRK109 Touch Screen Smart Cardboard Bursting Tester iyithuluzi lamazwe ngamazwe lohlobo lwe-Mullen okuyithuluzi eliyisisekelo lokuhlola ukusebenza kwamandla kwephepha nekhadibhodi.Lolu hlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa, luthembekile ekusebenzeni, futhi luthuthuke kakhulu kwezobuchwepheshe.
I-DRK109CQ Pneumatic Smart Cardboard Burst Tester
I-DRK109CQ Pneumatic Intelligent Burst Tester iyithuluzi lamazwe ngamazwe lohlobo lwe-Mullen kanye nethuluzi eliyisisekelo lokuhlola amandla nokusebenza kwephepha nekhadibhodi.